ဝက်ခြံ နဲ့ မျက်နှာပြင် အမာရွတ်များ'''' - SANTHITSA
ဝက်ခြံ နဲ့ မျက်နှာပြင် အမာရွတ်များ””
သင့် မျက်နှာပြင်မှာ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်စေ ဝက်ခြံများ ထွက်လာတဲ့ အခါ သင်ဟာ မညှစ်ရ မနေနိုင်အောင်ကို ဖြစ်နေလေ့ ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဘယ်သို့ပင် ထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ် ဆိပ်ဆွဲ ညှစ်ထုတ်ရမှကို နေသာ ထိုင်သာ ရှိလေ့ ရှိကြတာကြောင့် မျက်နှာပြင်အရေပြား နုနုပေါ်မှာ အမဲကွက် နဲ့ အမာရွတ်များ ထင်ကျန်နေတော့တာကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရ ပါတော့တယ်။
အမှန်ကတော့ ဝက်ခြံထွက်လာရင် မညှစ်မိအောင် သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍များ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဝက်ခြံတို့ကို ညှစ်မိဆိပ်ဆွမိလို့ အမာရွတ်တွေ ဖြစ်နေလို့ စိတ်သိပ်မညစ်ပါနဲ့ ။ သင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ရဆိုးနေတဲ့ အမာရွတ်များ သက်သာပျောက်ကင်းစေဘို့ အိမ်တွင်း နည်းလမ်းကောင်း အချို့ ဖော်ပြ ပေးပါ့မယ်။ အခု ဖော်ပြပေးမဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်းလေး တွေဟာ သင်ရဲ့ အနီးအနား လက်တစ်ကမ်းမှာပင် ရှိနေတဲ့ အဃြေံပစ္စည်းများသာ ဖြစ်တာမို့ သင့် အတွက် မခက်ခဲ စေပါ။
လိုအပ်တဲ့ ပါဝင် ပစ္စည်းအချို့”””
သင့် မျက်နှာပြင်က အမာရွတ်တွေ သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့….
မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ လက်ဘက်ရည်းဇွန်း နှစ်ဇွန်း စာသံပရိုသီး အရည် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်း စာသံလွင်ဆီ အနည်းငယ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာကို ပန်းဂံလုံး သန့်သန့်တစ်ခုတွင် ထည့်ပါ။ ထိုအထဲသို့ သံပရိုရည် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းအား ပေါင်းထည့်ပါ။ သံလွင်ဆီကို မထည့်ရပါ။ ထိုပစ္စည်း နှစ်မျိုးကို ရောသမ သွားစေရန် နာနာခေါက် မွှေပေးပါ။
အခုနက ရောမွှေထားတဲ့ အရောအစပ် ပစ္စည်းကို ဝက်ခြံကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အမာရွတ်များ ပေါ်မှာ လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပထမဦးစွာ မျက်နှာပြင်ကို ဆေးကျောသန့်စင်ပြီးမျက်နှာသုတ်ပုဝါနုနုဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပါ။ ပြီးရင် အခုနက ရောဖျော်ထားတဲ့အနှစ်များကို မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဝက်ခြံကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် အနည်းငယ် ကြာအောင် ခြောက်သွေ့သည် အထိထားပါ။ ပြီးလျှင် မျက်နှာကို ရေအေးနှင့် သန့်စင်ပေးပါ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနုနုဖြင့် ရေများကို ခြောက်သွေ့အောင် ပြန်သုတ်ပါ။
အခုနက ရှိနေတဲ့ သံလွင်ဆီကို အနည်းငယ် အပူပေးပါ။ ပူနွေးလာတဲ့ သံလွင်ဆီ နွေးနွေးကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အနှံသုတ်လိမ်းပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် လှည့်၍ ခပ်ဖွဖွ နှိပ်ပေးပါ။ သုတ်လိမ်းထါးသည့် သံလွင်ဆီကို တစ်နာရီခန့် ကြာအောင်ထားပါ။ ပြီးနောက် ရေကြက်သီးနွေး ကလေးဖြင့် ဆေးကြောလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ခန့် ဝီရိယစိုက်ကာ ပြုလုပ်ပေးပါက သင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဝက်ခြံကြောင့် အကြည့်ရဆိုးလှတဲ့ အမာရွတ်တွေ သိသိသာသာသက်သာပါးလျ လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှ ပ နု ညံ တဲ့ မျက် နှာ ပြင် မှာ အ မာ ရွတ် ကင်း စင် ဖို့ ဝီ ရိ ယ စိုက် ကြ ပါ စို့။
ဝကျခွံ နဲ့ မကျြနှာပွငျ အမာရှတျမြား””
သငျ့ မကျြနှာပွငျမှာ ဘယျလို အကွောငျးကွောငျ့ပငျ ဖွဈစေ ဝကျခွံမြား ထှကျလာတဲ့ အခါ သငျဟာ မညှဈရ မနနေိုငျအောငျကို ဖွဈနလေေ့ ရှိတယျ မဟုတျလား။ ဘယျသို့ပငျ ထိနျးခြုပျထိနျးခြုပျ ဆိပျဆှဲ ညှဈထုတျရမှကို နသော ထိုငျသာ ရှိလေ့ ရှိကွတာကွောငျ့ မကျြနှာပွငျအရပွေား နုနုပျေါမှာ အမဲကှကျ နဲ့ အမာရှတျမြား ထငျကနျြနတေော့တာကို စိတျပကျြဖှယျရာတှရှေိ့ရ ပါတော့တယျ။
အမှနျကတော့ ဝကျခွံထှကျလာရငျ မညှဈမိအောငျ သတိထားဖို့ လိုပါတယျ။ အကယျ၍မြား မကျြနှာပွငျပျေါက ဝကျခွံတို့ကို ညှဈမိဆိပျဆှမိလို့ အမာရှတျတှေ ဖွဈနလေို့ စိတျသိပျမညဈပါနဲ့ ။ သငျ့ မကျြနှာပွငျပျေါမှာ ကွညျ့ရဆိုးနတေဲ့ အမာရှတျမြား သကျသာပြောကျကငျးစဘေို့ အိမျတှငျး နညျးလမျးကောငျး အခြို့ ဖျောပွ ပေးပါ့မယျ။ အခု ဖျောပွပေးမဲ့ အိမျတှငျးနညျးလမျးကောငျးလေး တှဟော သငျရဲ့ အနီးအနား လကျတဈကမျးမှာပငျ ရှိနတေဲ့ အဃွေံပစ်စညျးမြားသာ ဖွဈတာမို့ သငျ့ အတှကျ မခကျခဲ စပေါ။
လိုအပျတဲ့ ပါဝငျ ပစ်စညျးအခြို့”””
သငျ့ မကျြနှာပွငျက အမာရှတျတှေ သကျသာပြောကျကငျးဖို့ ပွုလုပျရနျ လိုအပျတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့….
မုနျ့ဖုတျဆျောဒါ လကျဘကျရညျးဇှနျး နှဈဇှနျး စာသံပရိုသီး အရညျ လကျဘကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျး စာသံလှငျဆီ အနညျးငယျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
မုနျ့ဖုတျဆျောဒါ လကျဘကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျးစာကို ပနျးဂံလုံး သနျ့သနျ့တဈခုတှငျ ထညျ့ပါ။ ထိုအထဲသို့ သံပရိုရညျ လကျဘကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျးအား ပေါငျးထညျ့ပါ။ သံလှငျဆီကို မထညျ့ရပါ။ ထိုပစ်စညျး နှဈမြိုးကို ရောသမ သှားစရေနျ နာနာခေါကျ မှပေေးပါ။
အခုနက ရောမှထေားတဲ့ အရောအစပျ ပစ်စညျးကို ဝကျခွံကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာရတဲ့ အမာရှတျမြား ပျေါမှာ လိမျးပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ ပထမဦးစှာ မကျြနှာပွငျကို ဆေးကြောသနျ့စငျပွီးမကျြနှာသုတျပုဝါနုနုဖွငျ့ ခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပါ။ ပွီးရငျ အခုနက ရောဖြျောထားတဲ့အနှဈမြားကို မကျြနှာပွငျပျေါရှိ ဝကျခွံကွောငျ့ ဖွဈနတေဲ့ အမာရှတျတှပေျေါမှာ သုတျလိမျးပေးပါ။ မိနဈ အနညျးငယျ ကွာအောငျ ခွောကျသှသေ့ညျ အထိထားပါ။ ပွီးလြှငျ မကျြနှာကို ရအေေးနှငျ့ သနျ့စငျပေးပါ။ မကျြနှာသုတျပုဝါနုနုဖွငျ့ ရမြေားကို ခွောကျသှအေ့ောငျ ပွနျသုတျပါ။
အခုနက ရှိနတေဲ့ သံလှငျဆီကို အနညျးငယျ အပူပေးပါ။ ပူနှေးလာတဲ့ သံလှငျဆီ နှေးနှေးကိုမကျြနှာပွငျပျေါမှာ အနှံသုတျလိမျးပွီး စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျ လှညျ့၍ ခပျဖှဖှ နှိပျပေးပါ။ သုတျလိမျးထါးသညျ့ သံလှငျဆီကို တဈနာရီခနျ့ ကွာအောငျထားပါ။ ပွီးနောကျ ရကွေကျသီးနှေး ကလေးဖွငျ့ ဆေးကွောလိုကျပါ။ တဈပတျကို နှဈကွိမျခနျ့ ဝီရိယစိုကျကာ ပွုလုပျပေးပါက သငျ့မကျြနှာပွငျပျေါက ဝကျခွံကွောငျ့ အကွညျ့ရဆိုးလှတဲ့ အမာရှတျတှေ သိသိသာသာသကျသာပါးလြ လာတာကို တှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
လှ ပ နု ညံ တဲ့ မကျြ နှာ ပွငျ မှာ အ မာ ရှတျ ကငျး စငျ ဖို့ ဝီ ရိ ယ စိုကျ ကွ ပါ စို့။
Total Hits : 2076290